Taariikhda Ururka Ikhwaanu Muslimiin ee dalka Masar Qaybti 2aad – W/Q: Cali Cabdi Coomay | Burco Media
Sannadkii 1949-kii ayaa weerar gaadmo ah lagu diley hogaamihii ikhwaanu muslimiin Xasan Al-Banna iyo seedigii Cabddulkarim Mansuur. Markii dilku dhacayey Xasan Al-Banna iyo seedigii waxa balan la lahaayeen wasiir ka tirsan dawlada Masar. Wasiirkii ayaa balantii jaray oo aan iman goobtii lagu balansanaa. Ka dib Xasan Al-Banna iyo seedigii ayaa ka soo baxay goobtii balanta markii ay dibada u soo baxeen ayay laba nin oo ku hubaysan hubka fudud oodda kaga qaadeen rasaas.
= Sannadkii 1950-kii ayuu hogaankii ururka Ikhwaanu Muslimiin la wareegay Xasan Ismaaciil Hudeybi. Xasan Hudeybi wuxuu isku dayey inuu wax ka bedelo nidaamka ururku u shaqeeyo, balse wax ka horyimid xubno badan oo diiday in dib u habayn u gaar ah hogaamiyaha cusub laga fuliyo ururka. Qorshayaasha ugu weyni ee uu watay XasanHudeybi waxay ahayd inuu kala diro garab hubaysan ee ururka, laaakiin wuu awoodi waayey.
= sannadkii 1952-kii ayaa lagu qiyaasay xubnaha ikhwaanka hal milyan. Waxa kale oo sii kordhay tirada ciidamada ee ikhwaanu muslimiinka ka tirsan. Waxay abaabuleen ciidan kursiga ka tuura boqor Faaruuq, si xilka ay ugu fadhiistaan. Si inqilaabka aan looga dareemin inay ikhwaanku wadaan, ayey soo bandhigeen Gen. Max’ed Najiib iyo Jamaal C/naasir oo derajadiisu kabtan ahayd. Labadan sarkaal waxay la soo baxeen ciidamo ay ugu magaca dareen ciidamada xorta ah. Labadan sarkaal way kala fikir duwanaayeen, balse waxay ku midaysanaayeen inay xukunka qabtaan. Gen. Najiib wuxuu hoosta ka aaminsanaa fikirka ikhwaana, halka kabtan Jamaal C/naasir uu hoosta kala socday soofiyadka.
=isla-sannadkaasi waxa iska horyimad Gen. Najiib iyo Jamaal C/naasir waxaana soo baxay fikirkii ay hoosta ka aaminsanayeen. Ka dib sirdookii maraykanka iyo kii midowga soofidka ayaa ku tartamayey sidii ay gacanta ugu dhigi lahaayeen bilowga kacdoonka ee lagu ridayo boqor Faaruuq iyo ingiriiska oo la socday. Maraykanku waxay doonayeen inay gacanta ku qabtaan marinka suweysm ayna burburiyaan ururuka ikhwaanu muslimiin.
Halka Ruushku doonayey inuu shuuciyada gaadhsiiyo Masar oo islaamka soo kacaya cagta la mariyo. Laakiin ururka ikhwaanu muslimiin muu dareesanayn hadimooyinka reer galbeedka iyo Ruushka. Sirdoonka ikhwaanu muslimiinku wax badan kalamuu socon shirqoolada gaalada, balse waxay xooga saareen kacdoonka iyo inay kursiga ku fadhiistaan.
=dabayaaqadii sannadkii 1952-kii ayey sirdoonka maraykanku fuliyeen qorshe ay kula jireen maleeshiyo Falastiiniyeen ahayd oo loo yaqaanay Fidaa’iyiin oo ku noo Masar inay dilal iyo qaraxyo ku fuliyaan ingiriiska xarumihiisa ku yaalla Masar. Qaraxyo iyo dilal badan oo loo geystay ingiriiska ayaa keentay inay dhintaan ciidamo badan oo ingiriis ah.
=isla-sannadkaasi waxa inqilaab milatari xukunka ku qabsaday Jamaal C/naasir oo ay taageerayaan ururka ikhwaanu muslimiin. Markii xukunku uu qabsaday Jamaal C/naasir distuurkii dalka oo ahaa cilmaani ayey ka soo horjeesteen ikhwaanu muslimiin, waana ta keentay isku dhicii ugu horeeyey ee ikhwaanka iyo Jamaal C/naasr.
= sannadkii 1954-kii ayey ikhwaanu muslimiin isku dayeen inay shirqool ku dilaan M/weyne Jamaal C/naasir, balse wuu fashilmay, inkastoo xubno ka tirsan ikhwaanu muslimiin beeniyeen warkaasi. Markii warkaasi soo baxay ayuu Jamaal C/naasir soo saaray amar mamnuucaya ururka ikhwaanu muslimiin. Waxaanu xidhxidhay xubihii ikhwaanu muslimiin iyo kumanaan kale oo isugu jira xubno iyo taageerayaal.
=intii u dhexaysay sannadihii 1960 ilaa 1980 ururka ikhwaanu muslimiin wuxuu ku jray cabudhin, cago-jugleyn, xadhig iyo cadaadis. Iyaguna waxay kaga jawaabayeen mudaharaadyo, rabshado iyo weerar saxaafadda ah.